Sajhasabal.com |पोखराका वडा कार्यालयमा श्रृखलाबद्ध चोरी गर्ने पक्राउ
कास्की-२ मा विद्या भट्टराईको अग्रता कायमै, ७ हजार मतले अगाडी
पोखरामा नेकपाकी उमेरदवार विद्या भट्टराई दोब्बर मतले अगाडि(अपडेट)
पोखरामा एक महिलाले जन्माइन चम्ल्याहा शिशु
खराबी मौसमका कारण पोखरामा दुई हेलिकप्टर खेल मैदानमा अवतरण,के छ स्थिति ?
पोखरामा आकाशे पुल निर्माण शुरुआत्
मुग्लिन–पोखरा सडक चार लेनको बनाइने, कहिलेसम्म बनिसक्छ ?
पोखराका वडा कार्यालयमा श्रृखलाबद्ध चोरी गर्ने पक्राउ
साउन २९, काठमाडौं । पोखराको वडा कार्यालयहरुमा श्रृखलाबद्ध चोरी गर्दै आएका व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । काठमाडौं–११ घर भई पोखरामा डेरा गरी बस्ने किशोर थापा पक्राउ परेका हुन् । उनले एक वर्षको अवधिमा पोखराका वडा कार्यालयमा श्रृखलाबद्ध चोरी गरेका थिए ।
उनी यसअघि पनि डाकाचोरी मुद्दामा दुई पटक जेल परिसकेका व्यक्ति हुन् । पछिल्लो पटक ०७१ सालदेखि ०७४ सम्म जेल बसेका उनी छुटेलगतै फेरि चोरी धन्दामा लागेको पाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीले जनाएको छ ।
उनीसँगै चोरीको सामान किन्ने रुपचन्द्र गोपालीलाई पनि कास्की प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । काठमाडौंको कलंकीमा कम्प्युटर मर्मत पसल चलाएका उनले चोरीको सामान मात्र किनबेच गर्दै आएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।